” ကျွန်တော် တို့ ခံစစ်ကျိုးပေါက်သွား ခဲ့ပြီ…ကျွန်တော် တို့ အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင်ထားမှ ဖြစ်တော့မယ် “ – Na Pann San
Na Pann San W | April 11, 2020 | Knowledge | No Comments
ပထမ မရေးတော့ဖူး ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာ.. ဘာလို့လဲ ဆိုရင် ဒီနေ့ သံသယလူနာ လို့ သတ်မှတ်ရမယ့် လူနာနှစ်ယောက် ဆေးခန်းရောက်လာ တယ်… တယောက် နဲ့ တေ ယာက် နာရီ ဝက်လောက်ဘဲခြား တယ်.. ဆေးရုံ ကို လွှဲတာ လုံးဝမသွား ဘဲ အိမ်ပြန်ပြေး တယ်.. အခု ကိုယ့်ကိုကိုယ် self quarantine လုပ်ထားရတယ်…
ကဲ.. ခံစစ်အကြောင်း ဆက်ပြောရအောင်၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ဆောက်ရမ်းဆင်းရဲတော့ quarantine ကို ခံစစ်အနေနဲ့ သေချာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်… quarantine ကိုဘဲ အဓိကထားပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့တာ…. ယိုပေါက်တွေ ၊ စိမ့်ပေါက်တွေရှိနေတာ သိနေပေ မယ့် ၁၄ ရက် quarantine ကို ကျွန်တော်တို့ ခံစစ်အနေ နဲ့ ကျင့်သုံးခဲ့ကြ တယ်…
ကဲ… ဒါဆို ခံစစ်ပေါက် တယ် ဆိုတာဘာလဲ.. WHO ရဲ့ အတည်မပြုတဲ့ ပြောကြားချက် အရ ၁၄ ရက် quarantine က မလုံလောက်ပါဖူးတဲ့လေ.. ၃၇ ရက် လောက်မှ စိတ်ချရမယ်ပြောတယ်..
တကယ်လက်တွေ့မှာလဲ တီးတိန်က လူနာ အမှတ် ၁ နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ လူနာအမေက ၁၄ ရက်ကျော်မှ စစ်လိုက်တော့ positive ထွက်တယ်..
ဒီနေ့ထပ်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့လူနာလဲ..ဆယ့်လေးရက် အတွင်းမှာဘဲ စစ်လိုက်တယ်လို့ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ.. စစ်လိုက်တော့ ပိုးတွေ့တယ်..
တကယ့်မြေပြင်မှာက ၁၄ ရက် quarantine ပြည့် လို့ အိမ်ပြန်ခိုင်း လိုက်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေပြီဗျ..သူတို့ကို swab test လုပ်သင့်ပေမယ့် တိုင်းပြည်က မွဲနေတော့ swab test မလုပ်နိုင်ဘဲ..၁၄ ရက်အတွင်း ဘာလက္ခဏာမှ မပြရင် အိမ်ပြန်လွှတ်လိုက်ကြပြီ…..
ကျွန်တော်တို့က မိုင်းကို စနက်တံဖြုတ်ပြီး မြို့ထဲထည့်လိုက် သလိုဖြစ်သွားပြီ…ဒီနေ့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာကလူနာနဲ့ ထိတွေ့တဲ့သူတွေ ကို ၃၇ ရက် quarantine စလုပ်ဖြစ်ကြ တယ်…၁၄ ရက် quarantine ပြည့်လို့ အိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့လူနာတွေ မှာ….
ကျွန်တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကြိုးစားခဲ့တာဘဲ.. ..အဖြေက မနေ့က မြိတ်က မင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားရောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့တဲ့သူဆီမှာ ပိုးတွေ့တယ်…
အဲ့ဒီ မင်္ဂလာဆောင်ကို..ကော့သောင်းမြို့က လူတွေလဲ လာတက်ခဲ့တယ်ပြောကြတယ်….
ဒါဆို ၁၄ ရက် quarantine…အခုတရုတ်ကလှူတဲ့ အမြန်စစ် rapid test တွေနဲ့ စပြီး စစ်နေကြပြီ…ကျွန်တော်တို့ ခံစစ်ကျိုးပေါက်သွားခဲ့ပြီ…ကျွန်တော်တို့ အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင်ထားမှ ဖြစ်တော့မယ်…စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ အစအဆုံးရေးပြီး မတင်ခဲ့တာကို တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ…ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့် မိသားစုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းချင်သေးတယ်လေဗျာ..
တကယ်လို့ ကျွန်တော်မှာ အခွင့်အရေးရှိသေးရင်ပေါ့…
Source;…Kyaw Thu Ya.
ဒီပို့ကို ရေးသားဝေမျှသော ဆရာတို့ အား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ
ပထမ မရေးတော့ဖူး ဆိုပွီး ဆုံးဖွတျထားတာ.. ဘာလို့လဲ ဆိုရငျ ဒီနေ့ သံသယလူနာ လို့ သတျမှတျရမယျ့ လူနာနှဈယောကျ ဆေးခနျးရောကျလာ တယျ… တယောကျ နဲ့ တယောကျ နာရီဝကျလောကျဘဲခွားတယျ.. ဆေးရုံ ကို လှဲတာလုံးဝမသှားဘဲ အိမျပွနျပွေး တယျ.. အခု ကိုယျ့ကိုကိုယျ self quarantine လုပျထားရတယျ…
ကဲ.. ခံစဈအကွောငျး ဆကျပွောရအောငျ၊ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံက ဆောကျရမျးဆငျးရဲတော့ quarantine ကို ခံစဈအနနေဲ့ သခြောပွငျဆငျခဲ့တယျ… quarantine ကိုဘဲ အဓိကထားပွီး ပွငျဆငျခဲ့တာ…. ယိုပေါကျတှေ ၊ စိမျ့ပေါကျတှရှေိနတော သိနပေေ မယျ့ ၁၄ ရကျ quarantine ကို ကြှနျတျောတို့ ခံစဈအနေ နဲ့ ကငျြ့သုံးခဲ့ကွ တယျ…
ကဲ… ဒါဆို ခံစဈပေါကျ တယျ ဆိုတာဘာလဲ.. WHO ရဲ့ အတညျမပွုတဲ့ ပွောကွားခကျြ အရ ၁၄ ရကျ quarantine က မလုံလောကျပါဖူးတဲ့လေ.. ၃၇ ရကျ လောကျမှ စိတျခရြမယျပွောတယျ..
တကယျလကျတှမှေ့ာလဲ တီးတိနျက လူနာ အမှတျ ၁ နဲ့ထိတှခေဲ့တဲ့ လူနာအမကေ ၁၄ ရကျကြျောမှ စဈလိုကျတော့ positive ထှကျတယျ..
ဒီနထေ့ပျတှတေ့ယျဆိုတဲ့လူနာလဲ..ဆယျ့လေးရကျ အတှငျးမှာဘဲ စဈလိုကျတယျလို့ ထားလိုကျပါတော့ဗြာ.. စဈလိုကျတော့ ပိုးတှတေ့ယျ..
တကယျ့မွပွေငျမှာက ၁၄ ရကျ quarantine ပွညျ့ လို့ အိမျပွနျခိုငျး လိုကျတဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိနပွေီဗြ..သူတို့ကို swab test လုပျသငျ့ပမေယျ့ တိုငျးပွညျက မှဲနတေော့ swab test မလုပျနိုငျဘဲ..၁၄ ရကျအတှငျး ဘာလက်ခဏာမှ မပွရငျ အိမျပွနျလှတျလိုကျကွပွီ…..
ကြှနျတျောတို့က မိုငျးကို စနကျတံဖွုတျပွီး မွို့ထဲထညျ့လိုကျ သလိုဖွဈသှားပွီ…ဒီနေ့ ပနျးလှိုငျဂေါကျကှငျးအိမျရာကလူနာနဲ့ ထိတှတေဲ့သူတှေ ကို ၃၇ ရကျ quarantine စလုပျဖွဈကွ တယျ…၁၄ ရကျ quarantine ပွညျ့လို့ အိမျပွနျခိုငျးလိုကျတဲ့လူနာတှေ မှာ….
ကြှနျတျောတို့ အတတျနိုငျဆုံးတော့ ကွိုးစားခဲ့တာဘဲ.. ..အဖွကေ မနကေ့ မွိတျက မင်ျဂလာဆောငျကိုသှားရောကျပွီး ပွနျလာခဲ့တဲ့သူဆီမှာ ပိုးတှတေ့ယျ…
အဲ့ဒီ မင်ျဂလာဆောငျကို..ကော့သောငျးမွို့က လူတှလေဲ လာတကျခဲ့တယျပွောကွတယျ….
ဒါဆို ၁၄ ရကျ quarantine…အခုတရုတျကလှူတဲ့ အမွနျစဈ rapid test တှနေဲ့ စပွီး စဈနကွေပွီ…ကြှနျတျောတို့ ခံစဈကြိုးပေါကျသှားခဲ့ပွီ…ကြှနျတျောတို့ အကွီးအကယျြ ပွငျဆငျထားမှ ဖွဈတော့မယျ…စိတျဓာတျကနြလေို့ အစအဆုံးရေးပွီး မတငျခဲ့တာကို တောငျးပနျပါတယျဗြာ…ကြှနျတျောလဲ ကြှနျတေျာ့ မိသားစုတှနေဲ့ ပြျောရှငျစရာ အခြိနျတှကေို ဖွတျသနျးခငျြသေးတယျလဗြော..
တကယျလို့ ကြှနျတျောမှာ အခှငျ့အရေးရှိသေးရငျပေါ့…
မော်တော်ယာဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ဘာတွေ လွဲနေသလဲ…?
လက်ထဲမှာ ငွေပြတ်တာ နဲ့ ကြုံတဲ့ အခါ ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ လုပ်ကြည့်ပါ
” တပေါင်း လပြည့်နေ့” ( အဖေနေ့ ) ကို ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့်